‘नेपाली स्टील उद्योगले स्वदेशी बजार धानेको छ, स्टील उद्योगको भविष्य उज्यालो छ’ - corporatekhabar : Nepals first corporate news magazine and portal
‘नेपाली स्टील उद्योगले स्वदेशी बजार धानेको छ, स्टील उद्योगको भविष्य उज्यालो छ’
उमेश बराल २८ बर्ष देखी निमार्ण उद्योगका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनी संग नेपालका ठुला ठुला भनिने कन्सट्रक्सन उद्योगमा काम गरेको अनुभव छ । पञ्चकन्या , जगडम्बा, लक्ष्मी, अम्बे लगाएतमा काम गरिसकेका उनी हाल प्रमियम स्टीलमा मार्केटीङ म्यानेजरको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । उनै उमेश बराल संग केहि समय अघि खुलेको प्रिमियम स्टील कम्पनीको र निमार्ण सामग्रीको समसामयीक अवस्था बारे बसन्त अर्याल संग गरेको संवादः
प्रिमियर कम्पनीले कहिलेबाट उत्पादन शुरु गर्यो ? कस्तो छ मार्केटको रेस्पोन्स ?
२०७५ मंसिरमा हामिले लञ्च गरेका हौं । विगत सात वर्ष यता अहिले बजारमा मन्दी छाएको छ । अहिले उत्पादन बढेको छ । किनकी पहिला लोटसेडिङ थियो अहिले नियमित विद्युत उद्योगले पाउँदा उत्पादन बढेको छ । साथै नयाँ कम्पनी पनि खुलेका छन् यसले उत्पादन बढाएको त छ तर बजारमा मन्दी छाएको छ । सिजनको बेलामा पनि बजारमा निमार्ण सामग्रीको माग नहुनु आफैमा अचम्मको विषय बनेको छ ।
सरकारी ठुला आयोजना तथा भुकम्प पछि भवन बन्दै छन् । यसले त मार्केट बढ्नु पर्ने होइन र ?
निश्च्यय पनि हो । योजनाहरु हेर्यो भने त किताबमा कति छन् कति । योजनाहरु ठेकेदारको हातमा पनि छन् । तर आयोजना समयमा शुरु हुन सकेका छैनन् । सरकारले ठेकेदारको पैसा समयमा निकासी नगर्दा , ठेकेदारले योजनालाई निरन्तर अगाडि नबढाउँदा बजारमा मन्दी आएको जस्तो लाग्छ ।
बजारमा स्टिलका उद्योग त धमा धमा खुलेकै छन् । प्रिमियम स्टिल के कुरामा अरु भन्दा फरक ?
स्टील उत्पादन दुई किसिमले फरक हुन्छ । एउटा त टेक्नोलोजी हो अर्को कच्चा पदार्थ हो । हरेक दिन आउने प्रविधीमा नयाँ केहि न केहि सुधार भैरहेको हुन्छ । यसले वस्तुको उत्पादन गुणस्तरमा पनि फरक पार्छ । अहिले आएका केहि ठुला स्टील उद्योगहरु क्यापासिटीमा पनि दैनिक ८ सय टन भन्दा माथि उत्पादन गर्छन् । त्यस मध्ये हामी पनि एक हो । स्टील बन्ने भनेको प्राईम ब्लेटबाट हुन्छ । यसबाहेक अरु सेकेन्डेरी समान आए भने उत्पादन घटेर जान्छ । यसले घाननै पुग्दैन । हमी संग प्राईम ब्लेट भन्दा अरु विकल्प नै छैन । नयाँ टेक्नोलोजी र उत्पादन क्षमता बढी हुँदा मुल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ । पहिला कुनै कम्पनीको मात्र मोनेपोलि थियो । अहिले त्यो घटेको छ ।
यसको मुल्य अरुको भन्दा फरक हो र ?
मुल्य रेट सबै उद्योगको लगभग उस्तै छ । केहि पुरानो उद्योगले आफ्नो ब्राण्डको कारण केहि बढी रेट छ । अहिले खुलेको कम्पनीको उत्पादन पुरानाको भन्दा नराम्रो भएर सस्तो भएको हाईन । बजारमा प्रतिस्पर्धाको लागि मुल्य थोरै तल राखिएको हो । हाम्रो नयाँ कम्पनी भए पनि पुरानो भन्दा उत्कृष्ट उत्पादन हो । प्रिमयम स्टील नयाँ टेक्नोलोजीबाट उत्पादित स्टील भएको कारणले हाम्रो गुणस्तरिय स्टील हो । यो प्रविधिकहरुले बढी बुझेका हुन्छन् ।
सबैले आफुलाई नै राम्रो भन्ने दाबी गर्छन् । ग्रहाकले कसरी छुट्याउने कुन राम्रो भनेर ?
धेरै कम्पनीले आफुलाई जापानिज् वा जर्मन प्रविधीबाट उत्पादिन भएको भन्दै प्रचार गर्ने गरेका छन् । यो भनेको आफुलाई राम्रो देखाउने मात्र हो । कोकाकोला अमेरिकन प्रविधी हो भन्दैमा अमेरिकामा र नेपालमा उस्तै क्वलिटीको कोक त पाईदैन नि । हाम्रो स्टील उद्योग पनि त्यस्तै हुन् ।
स्टील उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ सबै बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हो कि के ?
कच्चा पदार्थ निर्विकल्प भारतमा निर्भर हो । भारत बाहेक अरु देश संग ल्याएको कच्चा पदार्थमा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन अथवा भनौ अरु देश बाट ल्याउदा फाईदा हुँदैन । तर कहिलेकाहि चीन बाट पनि थोरै आउने गरेको छ । तर त्यो पनि भारतिय बाटो हुँदै आउने गरेकाले टाढा बाट ल्याउँदा बढी मुल्य पर्न जान्छ । डण्डीको एउटै कच्चापदार्थ माईल स्टील ब्लिेट हो । नेपालमा ल्याएर तपाक्रममा राखी आवश्यकता अनुसार रोलिङ गरि डण्डी बनाउने हो ।
नेपालमा उत्पादित स्टील नेपालमा मात्रै खपत हो कि निर्यातको पनि संभावना छ ?
नेपालमा उत्पादित डण्डी नेपालमा मात्रै खपत हुने हो । हामीले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरेको स्टील निर्यात गर्न सक्दैनौ । बाहिरको मार्केट संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौ । हाम्रो मुख्य बजार भनेको भारत हो । भारत आफै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छ जसले गर्दा त्यहाँ यहाँबाट लगेको भन्दा सस्तो पर्न जान्छ । हाम्रो जति उत्पाद हुन्छ नेपालमै खपतको लागि हो । नेपाल निमार्णको फेजमा भएकोले यहाँको उत्पादन नेपालमै खपत हुन्छ ।
अहिले हाम्रो बजार नेपाली डण्डीले नै धानेको छ ?
नेपालमा अहिले बाहिर बाट कुनै डण्डी आयत गर्नु पर्दैन । नेपालको डण्डीले नै धानेको छ । तर कुनै कुनै भारतिय कन्सट्रक्सन कम्पनीले सम्झौता अनुसारनै बाहिर बाट डण्डी ल्याउँछन् । यो पनि न्युन स्तरमा छ ।
आयोजना निमार्णमा बाहिरी कम्पनी आउँदा उनिहरुकै समान प्रयोग गर्दा त नेपाली उद्योगलाई असर पर्छ होला नि ?
ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न छुटमा भारतबाट डण्डी ल्याउने गरेका थिए । त्यो प्रक्रिया अझै पनि केहि ठाउँमा छ । विशेषगरी ठुला आयोजनामा बाहिरबाटै निमार्ण सामग्री ल्याउँदा स्वदेशी कम्पनी मर्कामा पर्ने हुन्छ । सरकारले विदेशी निमार्ण सामग्री छुटमा ल्याउन दिदाँ स्वदेशी कम्पनीलाई त घाटा नै हुन्छ ।
कसै–कसैले अहिले पूर्वधार निमार्णको समय भएकोले धेरै खपत भएको छ । केहि वर्ष पछि डण्डीको बजार स्वत्तै घट्छ भन्ने पनि गरेका छन् नि ?
सिमेन्ट, स्टील भनेको ‘बेसिक निड’ जस्तो हो । खाद्य वस्तु जस्तै हो । के दश बाह्र वर्ष पछि निमार्णका काम नै हुँदैनन् त ? डिस्टक्सन र कन्सट्रक्सन चलिनै रहन्छ । अहिले बनाएका भौतिक संरचना २० वर्ष पछि पुराना हुन्छन् । फेरी नयाँ बनाउनु पर्छ त्यसको लागि त फेरी सामग्री चाहिन्छ नी । एक पटक बनाएर सधैभरीलाई त हुँदैन । हामी विकासिल राष्ट्र हुनै बाँकी छ, विकासित राष्ट्र हुने झन कहिले हो । राष्ट्र विकास हुनुको एउटा पक्ष विकास निमार्ण हो । पूर्वधार निमार्ण हो । यसको भविश्व उज्यालो छ ।
केहि भन्न छुट्यो कि ?
सरकारले उद्योग खोल्न दिइ सकेपछि त्यसलाई बाच्न स्थीती पनि दिनु पर्छ । सरकारले राजस्व मात्र लिन खोज्ने र उद्योग न फस्टाउने हो भने त न देश बन्छ न उद्योगी बन्छन् । बैंकको व्याज देखी बजार सबैमा सरकारले आँखा लगाउन जरुरी छ । बैंकहरु आफु खुसी व्याज बढाईरहेका छन् । यसले उद्योग फस्टाउनको लागि बाधन बनेका छन् । सरकारले उनुत्पादक भन्दा उत्पादक क्षेत्रलाई फोकस गरेर फाइनान्सीलय निती बनाउनु आवश्यक छ । निमार्ण सामाग्रीका उद्योगलाई सरकारले अत्य आवश्यक बस्तुको रुपमा हेर्नु जरुरी छ ।
प्रकाशित : २१ चैत्र २०७५, बिहीबार